Ciyaarhanada Belguim u dhashay ee Chelsea oo sabab u noqon kara iney kooxda Blues ka hesho Ciyaaryahan Radja Nainggolan | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Ciyaarhanada Belguim u dhashay ee Chelsea oo sabab u noqon kara iney kooxda Blues ka hesho Ciyaaryahan Radja Nainggolan
Ciyaarhanada Belguim u dhashay ee Chelsea oo sabab u noqon kara iney kooxda Blues ka hesho Ciyaaryahan Radja Nainggolan
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 13-06-16 11:38 AM Eden Hazard ayaa qirtay inuu doonayo in xiddiga ay isku dalka yihiin Radja Nainggolan uu kula soo biiro kooxdiisa Chelsea.
Blues ayaa dalab 23 milyan oo ginni ah ka gudbisay xiddiga qadka dhexe ee kooxda AS Roma, kaasoo doonaya inuu ka qeyb noqdo kacaanka tababare Antonio Conte ee kooxda ka dhisan Stamford Bridge.
Kabtanka xulka Belgium Hazard ayaa hoosta ka xariiqay in isaga iyo goolhaye Thibaut Courtois ay isku deyayaan inay xiddigaan qadka dhexe Nainggolan ku qalqaaliyaan inuu usoo dhaqaaqo kooxda ka dhisan Galbeedka London, ka hor kulankooda furitaanka Euro 2016 ee ay caawa wajahayaan xulka Italy.
“Thibaut Courtois iyo anigu waxaan jeclaan laheyn inuu Radja Nainggolan yimaado Chelsea,” ayuu Hazard u sheegay saxaafadda. “Waxaan u maleynayaa inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha qadka dhexe ee ugu wanaagsan adduunka.”
Nainggolan ayaa Isbuucii lasoo dhaafay daaha ka qaaday in tababare Antonio Conte uu durba ku qalqaalinayo inuu kula soo biiro Chelsea, laakiin wuxuu ka dhawaajiyey inay Blues u baahnaan doonto inay saxiixiisa ku qarash gareyso lacag badan.
“Tababare Conte durba waa uu i doonayey markii uu joogay Juventus xiiso ayuu ii qabay, laakiin waxaan u sheegay in aanan ka tegi doonin Roma oo aanan ku biiri doonin Juventus. Hadda wuxuu isku deyayaa inaan u raaco Chelsea.
“Waan ogahay inay Chelsea tahay koox weyn, laakiin waa inaan arrimo badan ka fikiraa. Ma sahlana inaan ka tago Italy ka dib 12 sanno oo aan ku qarash gareeyey. Ugama tegi doono Italy farqi iska yar”.